चार दिन न्यूयोर्कमा तपाइँ सोच्नुहुन्छ भन्दा कम पैसाको लागि यात्रा समाचार
जब हामी सोच्दछौं न्यूयोर्कको यात्रा, हामी सँधै विश्वास गर्छौं कि सिकेटको विकल्प बिना पकेट खुल्नेछ। ठीक छ, खोज र खोज, हामीले तपाईंको लागि उत्तम उडान फेला पार्‍यौं। किनकी हामीलाई थाहा छ कि यात्रा कति लामो हुन्छ, यद्यपि एक कडा समय मा, तपाईले मुख्य बुँदाहरूको आनन्द लिनुहुनेछ जुन न्यूयोर्कले तपाईका लागि छ।
तर यो थाहा छ कि यो तपाइँको लागी अधिक खर्च लाग्दैन सोच्न को रूपमा, विचार र अधिक रमाईलो हुन्छ। एक राउन्डट्रिप उडान कि तपाइँ सोच्ने भन्दा कम पैसा को लागी आउँछ। बाहिरी यात्रा सीधा हुनेछ, जबकि फिर्ती केवल एक स्टपओभर हुनेछ। जब तपाईले मूल्य देख्नु हुन्छ, तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि तपाईले जहाँ हेर्नुहुन्छ, यसले क्षतिपूर्ति दिँदछ। आउनुहोस्?
1 न्यूयोर्कको लागि उडान प्रस्ताव
2 न्यूयोर्कमा सस्तो होटल
3 चार दिन मा न्यू योर्कमा के हेर्ने
न्यूयोर्कको लागि उडान प्रस्ताव
हामी उसलाई छ !. यो एक उत्तम प्रस्ताव छ तीन दिन को लागी भाग्न को लागी सक्षम हुन। किनभने तार्किक रूपमा, बाँकी समय हामी यात्रा खर्च गर्नेछौं। यो एक प्रस्ताव हो जुन बिहीबार, सेप्टेम्बर १,, देखि सोहि महिनाको सेप्टेम्बर १ 13 सम्म चलेको छ। हामी भित्र जानेछौं म्याड्रिडबाट नेवार्क एयरपोर्ट सम्म सिधा उडान.
फर्कने क्रममा, हामी एक स्टपओभर गर्नेछौं। जसको मतलब अलि बढी समय हो, तर अझै पनी अनुमान छ कि बाहिरी यात्रा hours घण्टाको लागी फिर्ताको बारेमा, १० को बारेमा। त्यसोभए, यदि हामीसँग सेप्टेम्बरको ती दिनहरू गर्न अझ राम्रो कुरा छैन र हामी पोखरी पार गर्न चाहन्छौं भने, को लागी लिएका छन् आरक्षण गर्नुहोस् en अन्तिम समय.
न्यूयोर्कमा सस्तो होटल
कुनै श doubt्का बिना, हामी पनि ती दिनहरूको मजा लिन चाहन्छौं, राम्रो होटल छनौट गरेर। जब हामी राम्रो कुरा गर्छौं हामी सब भन्दा महँगोलाई स are्केत गर्दैनौं, किनकि तार्किक रूपमा हामी दिनलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिताउँदछौं। त्यसोभए, पैसा बचत गर्न, आदर्श भनेको लजिंग जस्तो एक लजिंग हो 'नहर लुफ्ट होटल'। यो चिनटाउनमा अवस्थित छकेन्द्रबाट केवल kilometers किलोमिटर मात्र। यसको लागि लगभग २०० यूरो खर्च हुनेछ, जब सम्बन्धित फीस थप गर्दा। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि यो राम्रो विचार हो भने यसमा जाँच गर्नुहोस् Hotels.com.
अवश्य पनि, यदि तपाईं पहिलो विकल्प राख्न चाहनुहुन्न, तपाईंसँग दोस्रो उपलब्ध पनि छ। यो केन्द्रको अलि नजिक छ र पछिल्लो भन्दा समान मूल्य छ। न्यूयोर्कमा तपाईंको कम्तिमा लगभग २०० यूरोको लागि। अब हामी 'जर्जियो होटेल' को बारेमा कुरा गर्दैछौं र तपाईंले यसलाई पाउनुहुनेछ लङ आइल्याण्ड शहर। के तपाई आरक्षण गर्न चाहानुहुन्छ ?, फेरि प्रविष्ट गर्नुहोस् Hotels.com.
चार दिन मा न्यू योर्कमा के हेर्ने
हामीलाई थाहा छ कि यस ठाउँको न्यु योर्क देख्न असम्भव छ, तर कम्तिमा पनि हामी यसलाई सकेसम्म बढी रमाउन कोसिस गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं। त्यसो भए, पहिलो दिनको हामी नजिक हुन सक्दछौं 'टाइम्स स्क्वायर'। यो भन्न सकिन्छ कि यो विश्व मा एक प्रख्यात वर्ग हो। नियन संकेतहरूले तपाईंलाई छिटो समात्नेछन्।
त्यसो भए, तपाईं ब्रडवेको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ र पक्कै पनि हामी प्रसिद्ध 5th औं एभिन्यू बिर्सन सक्दैनौं। उनी हुन् जसले उत्तर र दक्षिण म्यानहट्टनको एकजुट गर्छिन्। यो एक व्यावसायिक सडक हो जुन तपाईं असंख्य चलचित्रहरूमा देख्नुहुनेछ। तब, हामी मा रोकिनेछ 'सेन्ट प्याट्रिक क्याथेड्रल' किनकि यो यस क्षेत्रमा सही छ। आइतवार स्प्यानिश भाषामा ठूलो मात्रा हुन्छ। उही दिन हामीसँग हेर्नको लागि समय हुनेछ 'रकफेलर केन्द्र', जुन भवनहरूको एक जटिल हो। त्यसोभए, हामी केहि फोटोहरू लिन सक्दछौं, यद्यपि तिनीहरू हामीलाई ठूलो आवाज पनि दिन्छन्। त्यहाँ कन्सर्ट र गालाहरू छन्, तपाईले एउटा ठूलो 'लेगो' स्टोर र अर्को ढोका, टेलिभिजन नेटवर्क NBC को स्टुडियो पाउनुहुनेछ।
तपाईंको यात्राको अर्को दिनमा, तपाईं विभिन्न जिल्लाहरूको भ्रमणमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। क्वीन्स वा ब्रोंक्स र ब्रूकलिन तपाईको उत्तम विकल्पहरू हुन्। यसको पुलमा उभिन नबिर्सनुहोस्, किनकि यो न्यु योर्कको प्रतीकात्मक स्थान हो। तेस्रो दिन तपाईं उत्साहित र यसको लागि अप्ट गर्न सक्नुहुन्छ 'स्टेटन टापु फेरी' जहाँ १ minutes मिनेट को लागी तपाइँ अधिक नजिकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ स्वतन्त्रताको मूर्ति। यो नि: शुल्क यात्रा हो, त्यसैले यदि सूर्यास्तमा तपाईंसँग गर्न उत्तम केहि छैन भने, पछाडि जानुहोस् र प्रकाशित शहरको आनन्द लिनुहोस्।
संग्रहालयको भ्रमण गर्न र एकमा रमाउन नबिर्सनुहोस् सुसमाचार जन। तपाईं तिनीहरूलाई हर्लेममा र नि: शुल्क पाउन सक्नुहुन्छ, चन्दा सधैं दिइन्छ। 'न्यू योर्क पब्लिक लाइब्रेरी' मा नि: शुल्क प्रवेश छ र तपाईं आश्चर्यचकित हुनेछ, त्यसैले यसको भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस्। सायद अन्तिम दिनको लागि, उत्तम चीज भनेको फेसनल र राम्रा-राम्रा इलाकामा भ्रमण गर्नु हो। को सोहो वा चाइना टाउन ती महान विकल्पहरू हुन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » न्यु योर्कमा चार दिन तपाईलाई सोचे भन्दा कम पैसाको लागि
काला टुरक्वेटा, मेनोर्काको सुन्दर कुनामा